Ikhefu Administrative, izici zayo
Uhlelo oluyisisekelo oluthi isenzo zomthetho, elawula ubuhlobo oluphakathi komqashi kanye nomsebenzi in the Russian Federation, kuyinto Wobudlelwano Ikhodi yezwe uthe. Ngokuhambisana Article 107 kwale dokhumenti, futhi zonke zokusebenza enamandla umuntu unelungelo lokuphumula, uhlobo okuyinto ubhekwa iholidi - kwenkathi ethile ngesikhathi lapho umsebenzi ushwele benza imisebenzi yabo. Umtsetfo loshayiwe uniketa tindlela ngokuhlelwa ngezigaba ezilandelayo leli holidi:
Zamabanga aphansi naphezulu.
sokuphumula sonyaka ezikhokhelwayo ezingakhokhwanga.
Nokubeletha, ukunakekela ingane, noma iholidi, okuyinto Ilungiselelwe mayelana nesigameko ukuqeqesha abasebenzi (isibonelo, ngeposi eyunivesithi).
Ngokuhamba umsebenzi, ungase uhlangane esingalindelekile umthetho umqondo ezifana ikhefu zokuphatha. Le nkulumo ibhekisela xaxa ekhulunyiwe inkulumo isitayela. Ngokuhambisana owayenelungelo elingokomthetho lokubuthola ikhefu zokuphatha - iholidi ngaphandle kwenkokhelo, okungukuthi ezingakhokhwanga ngokuphelele. iholide okunjalo "ngezindleko zakhe siqu" has umehluko wemisindo nemiqondo yamagama athile kanye izici.
Ngakho kulokho izimo umqashi onganikeza ikhefu zokuphatha? Ngokwesibonelo, ngenxa yezizathu ezinhle noma ngenxa yezizathu umndeni (lomshado, umngcwabo noma efana). Umqashi unelungelo lokuthathwa njengomsulwa lenqabele ukunikeza sekhefu esinjalo umsebenzi, ngenxa yokuthi ayisiyona umsebenzi waso. Kulokhu, akufanele ukhulume mayelana nomthetho phakathi komsebenzi kanye nomphathi wakhe, kodwa kunalokho ngobuhlobo phakathi kwabantu.
Isitatimende ikhefu zokuphatha, isinqumo enikezelwe yayo noma Ukwenqaba eza ngqo ekhanda kwenhlangano noma umuntu ogunyazwe kuye ngaphansi kwazo. Isikhathi salesi ukuphumula kucociswana ngamunye, kuye isikhathi.
Endabeni ka nokwenqatshwa kokunikezwa ikhefu elingakhokhelwa ngesizathu esihle, isisebenzi unelungelo lokukhalaza enkantolo. izigameko ezinjalo zenzeka, njengoba umthetho, kuyaqabukela njengoba "kufaneleko" isizathu incoma ngokwayo umqashi, umthethomgomo esingenayo ngisho ohlwini eyabonisa izizathu ezinjalo. Esimweni lapho umqashi enqaba ikhefu zokuphatha umsebenzi, futhi lokho kuphambene isinqumo ukuphathwa sika hhayi ukuvela emsebenzini isenzo sakhe kubhekwa ukuhlukumeza zabasebenzi isiyalo futhi esibandakanya nemiphumela ethile. Umuntu onjalo angase abe kuncike esinyathelweni sokujeziswa.
Umqashi iphoqelekile ukuba inikeze zokuphatha ikhefu umsebenzi wenhlangano kwenzeka ukuthi omunye:
Umhlalaphansi (usayizi tempering kulokhu zokhahlamba kusuka izinsuku 1 kuya 14).
Inkosikazi (umyeni wakho) noma umzali lempi wabulala (abalimele, baba okhubazekile) ngenxa ekwenzeni imisebenzi yabo (izinsuku ezingu-14 ngonyaka).
Abantu abanokukhubazeka (izinsuku ezingu-60 ngonyaka).
Wonke umsebenzi unelungelo izinsuku ezinhlanu noma ngaphezulu ikhefu zokuphatha uma kuzalwa umntwana, ukufa ka isihlobo esiseduze, umshado wakhe siqu. Yena iholide muhle ngoba abaqashi abaningi abayibheka njengebalulekile ukuwusiza ngokuzithandela okukhulu ngaphezu kwabo le sekhefu lonyaka kuhlinzekelwe emthethweni.
Ngesikhathi esifanayo isisebenzi onquma ukuthatha iholidi ngezindleko zakhe siqu, njengoba umthetho, kuyaphela ngokushesha ngangokunokwenzeka okuphathelene nalokho bese ubuyela zenza imisebenzi yazo. Kwaqhubeka zokuphatha izinsuku zelivu ungalilahli
ikhokhwe. Izinzuzo kulokhu azitholakali.
Kuyini inkontileka namanye amazwe
Imisebenzi umphathi wehhovisi
Inhlawulo ukulahlekelwa ipasipoti - isijeziso esilungile ngokwenza ukunganaki
Umonakalo evroprotokol: incazelo, isamba kanye ekubalweni lokumiswa
Izidakamizwa "agomelatine": ukubuyekezwa kanye Isicelo
Absolutism Ikhanyisiwe eRussia
Indlela kuphole amanzi aquarium? izindlela Ukupholisa
Isakhiwo DNA ne-RNA isakhiwo
I-hematogen ini? Izinzuzo zayo nokulimaza umzimba
Ushukela Palm Grand Hotel 4 * (Thailand, Phuket): izithombe kanye nokubuyekeza
Sasha Petrov biography, Filmography. ukuphila komuntu umlingisi
"Google" -ukuthi: ungayisebenzisa kanjani? Izinguqulo zobuchwepheshe
Uju Diaghilev - ephulukisa nemvelo